सर्जरी निर्णय यसलाई स्वास्थ्य मामलामा reasonably आवश्यक छैन, विशेष गरी यदि एकदम गाह्रो छ। केही मानिसहरू नाक वा फैलएको कान मा बाल्यकाल जुरे ग्रस्त, र धेरै युवा बालिका सानो छाती नहट्न थाल्छन्। आधुनिक चिकित्सा केही वित्तीय अवसर लागि बाहिरी मा कमीकमजोरी सच्याउन सक्षम छ।
तर, यसको निपटान मा पैसा को आवश्यक रकम छ - यो केवल आधा युद्धमा छ। एक धेरै गाह्रो कार्य धेरै सर्जन प्रकृति द्वारा तल राखे गरिएको छ के सफलतापूर्वक ठीक गर्ने फेला पार्न हुनेछ। प्लास्टिक सर्जन मास्को, तल प्रस्तुत गरिएको छ जो दर्जा, पक्कै पनि व्यावसायिक सीप र अनुभव को वर्ष अधिकार।
एक सबै भन्दा राम्रो "सौन्दर्य डाक्टर 'यो निजी संस्थाले काम, 2006 मा स्थापित को। "Esthete क्लिनिक" केन्द्रीय क्लिनिकल अस्पताल №2Semashko मा स्थित छ। चिकित्सा कर्मियों को काम सञ्चालन को आचरण सीमित छैन। प्रारम्भिक सर्वेक्षण समावेश:
स्वागत गर्ने चिकित्सक;
ईसीजी, अल्ट्रासाउंड र एक्स-रेज;
विस्तृत परामर्श एनेस्थेसिओलोजिष्ट।
साथै, मा outpatient अनुगमन गर्ने postoperative अवधि "Estet क्लिनिक" को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिशा को छ।
केही मानिसहरू लागि, प्लास्टिक सर्जरी एक विधिपूर्वक, डाक्टर एकदम सही गर्ने abdominoplasty, lipofilling, Liposuction, gynecomastia आवश्यक परिभाषित त छ। सुधार शरीर मा प्लास्टिक सर्जन को मास्को दर्जा ठीकै Ivanchenkova TA लाग्यौं
abdominoplasty र Liposuction को थियोसिस को लेखक - यो निष्पक्ष सेक्स को मात्र प्रतिनिधि हो। कार्य अनुभव 21 वर्ष छ।
प्रशंसापत्र सर्जन को भाग मा ठूलो व्यावसायिकता र ध्यान बारेमा भन्छन्। को परामर्श समयमा, तातियाना भविष्यमा सञ्चालन बारे विस्तृत बताउँछ र "काम स्कोप" मूल्यांकन गर्छ। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, के Ivanchenkova, सर्जरी पछि जीवनको यस विशेष तरिका रोक्छ।
हामी केही थाहा Liposuction - यो मोटोपना लागि panacea छैन। सर्जरी समयमा छ जो वजन नियन्त्रणमा मा फिर्ता हुने अतिरिक्त शरीर बोसो, हटाउँदछ। तर रोगी फेरि वजन बढाउनका सुरु भने, नयाँ बोसो को संग्रह अपरिहार्य छ। मात्र Liposuction छैन पनि मास्को मा सबै भन्दा राम्रो प्लास्टिक सर्जन मदत गर्नेछ मार्फत वजन स्थायी। एउटा सञ्चालनको लागि चयन गर्ने महिला र पुरुष, यो बुझ्नुपर्छ।
Yakimets Valeriy Grigorevich
स्तन प्लास्टिक सर्जरी, सुधार र अनुहार लिफ्ट - आफ्नो विशेषता। Yakimtsa वी जी को एक विशेष सुविधा endoscopic प्रविधी को व्यापक प्रयोग हो। यो एक परिणाम, एक ठूलो खत रूप मा, खतरनाक पेट सञ्चालन तिरस्कार जो र भविष्यमा, एक वास्तविक प्रविधि छ। सानो punctures निको धेरै चाँडै र postoperative जटिलताहरुलाई जोखिम कम छ।
Yakimets प्लास्टिक सर्जन blepharoplasty सूची tops। मास्को मा, यो प्रक्रिया मात्र महिला लोकप्रिय 40 भन्दा बढी, पटल edema को समस्या फरक उमेर मा मान्छे प्रभावित किनभने छ। आँखा अन्तर्गत बैग, नियम, अनुहार एक थकित र अस्वस्थ नजर दिनुहोस्।
सर्जरी समयमा, प्लास्टिक सर्जन अतिरिक्त छाला र फैटी ऊतक हटाउँदछ। आफ्नो विरामीहरु Valery जी को endoscopic विधि संग गठन blepharoplasty उठाने संग संयुक्त सल्लाह दिएको छ। यस मामला मा, त्यहाँ लामो कायाकल्प को प्रभाव बढ्दै गएको छ।
मास्को प्लास्टिक सर्जन blepharoplasty धेरै निजी चिकित्सा संस्थाहरू छ, तर केवल बिरामीको Esthete क्लिनिक "मौका सबै भन्दा राम्रो विशेषज्ञहरु द्वारा देख्न छ। डा YAKIMTSOV समीक्षा कृतज्ञता शब्दहरू भरिएको। महिला व्यावसायिकता, प्रतिभा र संचार सजिलो मनाउन।
साथै, रोगी थप सर्जरी लागि तयार छैन भने, Valery जी कहिल्यै जिद्दी हुनेछ। ढिलो होस् वा चाँडो, व्यक्ति उहाँले सही थियो र "Estet क्लिनिक" फर्कन निश्चित हुन भनेर बुझ्छ।
प्लास्टिक सर्जन मास्को, दर्जा, फोटो र समीक्षा फोरम मा पाउन सकिन्छ जो सबैभन्दा हाम्रो देशमा लोकप्रिय छन्। एक व्यक्ति सर्जरी गर्न मौका छ भने, राजधानी र क्षेत्रीय निजी क्लिनिक बीच विकल्प स्पष्ट छ।
मास्को को केन्द्र मा क्लिनिक डा छ प्लास्टिक, संस्थापक र प्रमुख सर्जन छ Sergeev इल्या Vyacheslavovich। यसको लोकप्रियता चिकित्सा संस्था कारण जुन रूस मा कुनै analogues छ स्तन प्लास्टिक, को जुदाई गर्न धेरै हदसम्म छ।
जटिलताहरुलाई न्यूनतम जोखिम संग safest सञ्चालनका एक, त्यसैले Sergeev र सेवाहरू क्लिनिक को नकारात्मक समीक्षा शायद फेला - प्रसिद्ध सर्जन बारम्बार भन्ने mammoplasty स्वीकारे।
दर्जा मास्को प्लास्टिक सर्जन mammoplasty पहिलो स्थानमा इल्या Vyacheslavovich राख्दछ। "घोडा" यस प्रकारको - गर्छ के सबै भन्दा राम्रो, तर यो भन्न छैन कि कुनै अन्य प्लास्टिक को प्रकार। चिकित्सकहरु को प्रतिभाशाली टोली सक्रिय प्लास्टिक सर्जरी को सबै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्।
डा सफल प्लास्टिक टेलिभिजनमा विज्ञापन लुकाउन मद्दत गर्छ। धेरै वर्ष को लागि, Sergeyev को सेवाहरू सहभागीहरू वास्तविकता शो "डोम-2" उपचार। परियोजना को समर्पित प्रशंसक सल्लाह र पनि सञ्चालन मनपर्ने वर्ण पालन गर्न सक्षम थिए।
Grigoryants व्लादिस्लाव Semenovich
हामी भने छ रूपमा, सबै प्लास्टिक सर्जरी किनभने एक केहि छिन रहने विधिपूर्वक को प्रदर्शन गर्दै छन्। केही उपायहरु गम्भीर स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। अक्सर, विरामीहरु एक भटक septum को समस्या व्यवहार, यहाँ बस लक्षण केही हो:
सास नाक वा यसको अभाव को shortness;
नाक, खुजली र बेचैनी को सूक्खापना।
निदान आवश्यक डाक्टर राख्दछ, र पहिलो परामर्श मा सबै भन्दा राम्रो विशेषज्ञहरु प्राप्त गर्न आवश्यक छ। दर्जा मास्को प्लास्टिक सर्जन rhinoplasty हेडेड Grigoryants VS
आफ्नो डाक्टर आफ्नो पैतृक आर्मेनिया, र रूस मा स्थापित rhinosurgery सबै भन्दा ठूलो केन्द्र को राजधानी सार्दा पछि काम गर्न थाले। Crook, ताना वा नाक को टिप डूबा, ठूलो nostrils - माथिल्लो श्वसन टेक्नीसियन बीच लोकप्रिय छ जो व्लादिस्लाव Semenovich, गर्न पनि यसको आफ्नै विधि, कुनै समाधानगर्ननसकिनेखेललाईअनुमतिदिनुहोस् समस्या हो प्रयोग गर्दछ।
सिद्ध नाक पहिलो चरण आवश्यक परीक्षण र परीक्षा नियुक्त जो परामर्श, हुनेछ। तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम एक कम्प्युटर अनुकार छ। जानिन्छ, rhinoplasty लागि चिकित्सक अवसर anatomical सुविधाहरू सीमित। एक विशेष कार्यक्रम यो एकदम स्पष्ट नयाँ आकृति आकर्षित बनाउँछ।
विरामीहरु अनुसार, Grigoryants VS एक बुद्धिमान र सञ्चार गर्दा ध्यान विशेषताहरु। डाक्टर धैर्य सबै चिन्ता र आगामी सर्जरी र पुनःस्थापना अवधि बारेमा डर सुन्नुहुन्छ। प्रतिभा र सिप व्लादिस्लाव Semenovich मद्दत साँच्चै विरामीहरु परिवर्तन।
मास्को मा सबै भन्दा राम्रो प्लास्टिक सर्जन को र्याङ्किङ्ग Frau Klinik धेरै प्रतिनिधिहरु समावेश छ। यो ब्रान्ड अन्तर्गत हामी मांग दुवै रूस र विदेश मा आफ्नो विशेषज्ञता र अनुभव Blohin एन एस र Vulf आई ए दुवै उत्कृष्ट सर्जन संयुक्त छन्।
सर्गेई Nikolaevich Blohin पहिलो सोभियत संघ rektoabdominalnogo प्रालंब प्रयोग स्तन पुनर्निर्माण आयोजित कि ज्ञात। को "राष्ट्रिय स्तन वैज्ञानिक समाज" को टाउको, उत्कृष्ट युरोपेली क्लीनिक मा प्रशिक्षण र निरन्तर आफ्नो सीप सुधार।
Blokhin प्लास्टिक सर्जरी समर्पित पहिलो टिभी परियोजनामा भाग लिनुभयो। को आफ्नो काम र जीवन को सर्जरी छ वर्ण दर्शक पछि परिणाम "10 वर्ष मुनिका" वास्तविकता मा निरीक्षण गर्न सक्छन्। सर्गेई Nikolaevich प्राप्त गर्न सकारात्मक टिप्पणी धेरै धन्यवाद यति सजिलो थियो, र टिभीमा पनि अधिक जटिल कार्य विज्ञापन पछि।
Vulf इगोर Aleksandrovich
जहाँ मास्को मा सबै भन्दा राम्रो प्लास्टिक सर्जन सोच? Vulfa आई ए सञ्चालन संख्या डाक्टर लामो 18 हजार को चिन्ह पार गरेको - - दर्जा अर्को जादूगर Frau Klinik बिना कल्पना गर्न सकिएन यो कौशल को मुख्य सूचक हो?
लगभग बीस वर्ष पहिले, इगोर Aleksandrovich आफ्नै अभ्यास युरोप मा, जो को काम तथापि, सफलतापूर्वक रूसी क्लीनिक मा सञ्चालन सञ्चालन उहाँलाई रोक्न थिएन खुलेको छ। Wulff सञ्चालन सबैभन्दा उदाहरणात्मक हेरफेर को एक DPRK देखि राज्य आदेश छ। फिलिम अघि चलचित्र अधिकारी सामान्य खेल्छ जो किम इल सुङ्ग अभिनेता लागि बनाउन-अप, पर्याप्त छैन भन्ने लाग्यो। मानिस पनि नजिक-अप पोर्ट्रेट समानता अचम्मको थियो जो पछि धेरै प्लास्टिक सर्जरी, गरे।
विरामीहरु मात्र होइन व्यावसायिकता, तर पनि आफ्नो डाक्टर संग एक भरोसा सम्बन्ध लागि महत्त्वपूर्ण छ, जो हास्य को एक राम्रो अर्थमा, मूल्यांकन गर्छौं।
Egorova एमवी र कफ सैनिक - मास्को मा प्लास्टिक सर्जन, साइट Frau Klinik पनि हुन फेला सक्नुहुन्छ समीक्षाएँ जो। यी जवान डाक्टर आफ्नो सीप सुधार गर्न र पौराणिक ब्वाँसो र Blokhin काम पालन गर्न एक अद्वितीय मौका छ।
Gleb Igorevich Tumakov राम्रो छाप बनाउँछ विरामीहरु देखि प्रतिक्रिया, र आफ्नो काम को परिणाम, धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। त्यहाँ अनलाइन र दृश्यहरू विरोध, तर ती धेरै केही, त्यसैले यसलाई व्यक्तिगत डाक्टर संग भेट्न र आफ्नो स्वास्थ्य विश्वास गर्न चाहे र सौन्दर्य यसलाई लायक छ निर्णय गर्न राम्रो छ।
Marinicheva Irina Gennadevna
यो याद गर्न सजिलो छ मास्को को प्लास्टिक सर्जन, मूल्याङ्कन जो तपाईं अब पढ्ने ज्यादातर मानिसहरू छन्। तथापि, Iriny Gennadevny अनुसार, यो छैन प्रशिक्षण डाक्टर मा प्रतिभा वा कठिनाइको कमी को एक सूचक हो - fairer सेक्स सदस्यहरू। त्यसको विपरीत, एक महिला राम्रो बिरामीको समस्या बुझ्न र सम्भव डर सामना गर्न मदत।
कृतज्ञ बारेमा समीक्षा स्वागत को साधारण जमीन पाउन र सञ्चालनको मनसाय अनुमान गर्न सम्भव छ पहिलो मिनेट पहिले देखि नै छ जो संवेदनशीलता Marinichevoy आई जी, कुरा।
maxillofacial सर्जरी को क्षेत्र मा एक ठूलो विशेषज्ञ रूपमा, Irina जी निरन्तर सर्जरी blepharoplasty बनाउँछ। यी प्रक्रिया अक्सर एक outpatient आधार मा प्रदर्शन गर्दै छन्, र केही घण्टामा रोगी घर जान सक्नुहुन्छ। भनेर मनमा राख्न तल्लो र माथिल्लो परेलिहरु को समायोजन - यो अझै पनि सरल छ, तर सर्जरी, त्यसैले bruising र सुनिंनु को "ठूलो तस्वीर" र मुड बिगार्छ एक समय हुन सक्छ।
मास्को मा blepharoplasty लागि प्लास्टिक सर्जन को दर्जा बिना Marinicheva कल्पना गर्न असम्भव छ। को डा साझेदारी विधि र सिफारिसहरू को आधिकारिक वेबसाइट, तर र "पछि" "अघि" केही तस्वीर भन्दा बढी पत्यार पार्र्ने छ।
शिक्षा लागि योगदान
मास्को (विरामीहरु को समीक्षा अनुसार संकलित मूल्याङ्कन) को केही प्लास्टिक सर्जन कम अनुभवी पेशेवरहरुको लागि mentors छन्, तर केवल क्लिनिक Pavlyuchenko शुरुआती डाक्टर एक वास्तविक मौका दिन्छ।
"सौन्दर्य सर्जरी" - प्लास्टिक सर्जरी जनता मैत्री विश्वविद्यालय विभाग को भाग, जो प्रत्येक वर्ष यो प्रमुख रूसी विश्वविद्यालय को बारेमा 50 विद्यार्थी प्रशिक्षण आधारमा। तिनीहरूले एक अद्वितीय दृष्टिकोण र विधिहरू लियोनिद Leonidovich, पेटेंट पुष्टि अन्वेषण गर्न मौका छ।
घाँटी, को उन्मूलन को उपचर्म मांसपेशीमा sagging को सुधार को तरिका nasolabial Folds र नाक को सुधार स्तन पुनर्निर्माण र अन्य संग अंकन - Pavlyuchenko हाम्रो देश मा प्लास्टिक सर्जरी को संस्थापक मध्ये एक मानिन्छ त्यसैले खातावाला, सोभियत युग समयमा पुष्टि भएको थियो। एक आफ्नो काम को मुख्य निर्देशन को - गतिविधिहरु सिकाउने (यस सौंदर्यबोध विभाग सर्जरी विश्वविद्यालय को हेड)।
सबैभन्दा समीक्षा लियोनिद Leonidovich को व्यावसायिकता बुझाउँछ। साथै, त्यहाँ राय कि Pavlyuchenko छन् - प्राकृतिक को एक समर्थक, त्यसैले यो तपाईं अनावश्यक अतिरिक्त प्रक्रियाहरु गर्न सल्लाह कहिल्यै हुनेछ।
जोखिम - स्वैच्छिक छ
प्लास्टिक सर्जन मास्को मा रुचि छ? दर्जा Pavlyuchenko केही वर्ष पहिले, 2011 मा, यो मौलिक त्रुटिपूर्ण कारण बिरामीको मृत्यु भएको थियो। सर्जरी पछि, महिला एकै रातमा अस्पताल मा रहन छैन निर्णय, तर बिहान को उजुरी फिर्ता आए unwell महसुस। केही समय पछि हृदयघात बाट पछि पटक-पटक consultations रोगी मृत्यु भयो।
अनुभव सर्जन अनुसार, शोकमा painkillers को idiosyncrasy हुन सक्छ। साथै, महिला डाक्टर को पर्यवेक्षण अन्तर्गत थियो। दोष "सौन्दर्य सर्जरी" सिद्ध र यसको प्रतिष्ठा अचाक्ली प्रभावित भएको थियो।
सिद्ध उपस्थिति को सपना भयानक परिणाम निम्त्याउन सक्छ: चोट देखि मृत्यु। यसलाई ध्यान दिएर सर्जरी स्थगित वा पूरै नत्याग्ने सर्वेक्षण लिनुहोस्, र contraindications को slightest सङ्केत मा डाक्टर को सबै सिफारिसहरू पालन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
साथै, प्लास्टिक राम्रो अन्त गर्दा गर्दैन सुरक्षित गर्ने प्रयासहरू। कारण कम मूल्यहरु गर्न, विरामीहरु त्रुटि त अझै पनि राजधानी प्राध्यापकहरू सच्याउन छ जहाँ क्षेत्रीय अस्पताल मा डाक्टर, बारी।
प्लास्टिक सर्जरी मा Lipofilling
तिनीहरू परिवर्तन! प्लास्टिक - यो राम्रो वा खराब छ?
लेजर ओटोप्लास्टी: समीक्षा र परिणामहरू। ओप्लोस्टाएपछि एर्स - समीक्षा। ओटोप्लास्टी (कानको प्लास्टिक)
एक transplanted व्यक्तिसँग पहिलो रोगी क्यान्सर को मृत्यु
अवधारणा, सुविधा र उल्लेखनीय उपन्यास: को उत्पादन के हो
छोटा फ्रान्स: मास्को मा फ्रान्सेली क्याफे
गर्भावस्था मा झूटा श्रम दुखाइ। कसरी वास्तविक कुरा देखि भेद गर्न?
सबै समय को सबै भन्दा असामान्य खेल
नेटवर्क सुरक्षा। कार्यक्रम को लागि सुरक्षा को कम्प्युटर नेटवर्क
एक खरायो को लागि एक marinade कसरी चयन गर्ने? आगो, धूम्रपान वा बरस रही खरायो लागि marinade लागि सबै भन्दा राम्रो नुस्खा
हामी एक पक्ष जाँदैछन्: एक चमकीले नङ पालिस